Shiina oo u soo dhigatay dameerihii Afrika – Kasmo Newspaper
Updated - October 15, 2017 1:14 pm GMT
London (Kasmo), Dalal badan oo Afrikaan ah waxaa soo wajahaya ciriirigii ugu xumaa oo dameeraha ah, sidaasna waxaa sheegaya Ururka “Donkey Sanctuary” ee tan iyo 1969kii u taagan difaaca xoolahaan, xarumana ku leh daafaha dunida.
Waxaa halista ku haya mustaqbalka dameeraha ma ahan shaqada culus ee ay ka qabtaan dhulalka dhibta leh, isbeddelka cimilada amase cudur safmar ah oo ku dhaca, laakiin waa dalabyo gaar ah oo uga imanaya Peking.
Macaamiisha Shiinaha wxaya si gaar ah u danaynayaan haragga dameerka oo si aad ah loogu isticmaalo dawo-dhaqameedka iyo waliba cuntooyinka la quuto.
Warbixin uu Donkey Sanctuary isku soo duway bilowgii sannadka, waxaa ka soo baxaysa in sannad kasta tobannaan kun oo dameero ah loo dilo si arxan darro ah, loona darxumeeyo.
Waa dhibaato dhab ah oo ku dhacaysa xoolahaan iyo dhammaan dadka saboolka ah ee ugu tiirsan hawl-maalmeedkooda, laga bilaabo gaadiidka ilaa beeraha, oo dalal badan oo Afrikaan ah sida, Kenya, Zimbabuwe, Uganda, Tanzania, Botswana, Niger, Burkina Faso, Mali iyo Senegal.
Markii tiradii shacabka dameeruhu hoos u dhacday, Shiina, sida khayraadka kale “Raw material”, waxay bilowday in ay u jeedsato dhanka Afrika, si ay u soo daldalato xoolahaan qiimaha leh.
Sida xogta rasmiga ah sheegayso, tirada dameeraha Shiina oo sannadkii 1990kii ahayd 11 malyuun, waxay maanta hoos ugu dhacday 3 malyuun oo qur ah, natiijaduna waxay noqotay in sannadadii u dambeeyay Shiina liqdo dameerihii Afrika, taas oo Qaaradda badaysa ciriiri aan horey loo arag.
Dameeruhu waxay leeyihiin hab taran ah oo gaabis ah, taas oo sii murjinaysaa sidii loo heli lahaa xal wanaagsan. Qiyaasta Ururka Donkey Sanctuary faafiyay, sannad kasta waxaa la iibiyaa, ugu yaraan, 1,8 malyuun oo harag dameer ah, laakiin baahidu waxay ku dhowdahay 10 malyuun oo xabbo.
Dalabkiisa badan darteed, qiimaha dameerka Afrika wuu sii kacayaa, wuxuuna sii galayaa suuq ganacsi oo weyn oo balayaan ah. 3 sano oo qur ah gudahood, qiimaha 1 dameer oo qaangaar ah wuxuu noqday labajibbaar, isaga oo, isku celcelin ahaan ka gudbay min 60 ilaa 130 Dollar, sidoo kale waxaa badatay xatooyadiisa.
Qaaradda 4teeda gees, gaar ahaan Kenya iyo Zimbabwe waxaa ka abuurmay kawaanno qaali ah oo Shirkado Shiinees ah dhiseen, warshado casri ah oo heer farsamo iyo nadaafad sare leh, si joogta ahna dusha looga eego, si loo kordhiyo wax soosaarkooda.
Isku celcelin ahaan waxay maalintii gowrici karaan 150 dameer, kuwaas oo hilibkooda, inta la milxiyo, lana qaboojiyo la baakadeeyo, si dibadda loogu dhoofiyo.
Haragga dameerka marka Shiina la geeyo waa la kariyaa si uu u dhalo miid (Gelatine) midabkeedu maarriin yahay, maaddo dalka magac ahaan loo yaqaanno “Ejiao” oo lagu daro macmacaanka iyo cuntooyin kale oo Shiinuhu hamuun u qabaan, Una haystaan nafaqo caafimaad leh oo looga hortago gabowga iyo daweynta noocyo gaar ah oo Kansarka ah.